UNuki, isitshixo esivumayo esihambelana neKhayaKit | IPhone iindaba
ULuis Padilla | | Izixhobo ze-IP, HomeKit, Ezahlukeneyo
Ukutshixa okuthe ngcembe kufikelela kumakhaya ethu ngokuzenzekelayo, kodwa bajongana nokuthandabuza kwabasebenzisi ngenxa yamathandabuzo malunga nokhuseleko, uloyiko lofakelo olunzima kwaye, ngaphezulu kwako konke, iziphazamiso ezithetha ukutshintsha isitshixo sokuqala indlu yakho. UNuki usinika isikhiya sakhe esifanelekileyo esifuna ukuphelisa zonke ezi ngxaki kwi-swoop enye, ukusukela Inokhuselo olunikezelwa yiKhayaKit, ukufakelwa kwayo kulula kakhulu kwaye unokugcina isitshixo sakho sokuqala, ngaphandle kokutshintsha isitshixo. Sivavanye kwaye sichaza yonke into engezantsi.
Sikwazile ukuvavanya i-Kit epheleleyo equka i-Nuki Smart Lock 2.0 (ilokhi ekrelekrele), ibhulorho yeNuki (ibhulorho) kunye ne-Nuki FOB (irimothi). Eyona nto ibaluleke kakhulu kukutshixa okuhle, kwaye zombini ibhulorho kunye nomlawuli banokukhetha.
1 Nuki Smart Tshixa
2 IBhulorho yeNuki
4 Usetyenziso lweNuki
Nuki Smart Tshixa
Ukutshixa okuhle kukaNuki kuzisa into ezenzekelayo ekhaya emnyango ngaphandle kokwenza ufakelo oluntsonkothileyo okanye ukutshintsha isitshixo sakho, into eyimpumelelo ngokokubona kwam. Kuyinyani ukuba uyilo lwayo "lurhabaxa" ngaphezulu kwezinye iimodeli, kodwa lixabiso elincinci elihlawulwa ngolonwabo ukusukela oko ugqibile ukufakela kwimizuzu emi-5 nje ngaphandle kokutshintsha izitshixo zosapho lonke. Kwividiyo ungayibona yonke inkqubo yokufaka ichazwe ngokweenkcukacha. Nje ukuba sifakelwe sigcina inkqubo yokuvula ngesandla, njengawo nawuphi na umnyango oqhelekileyo, kodwa siya kuba nethuba lokusebenzisa i-iPhone kunye neKhayaKit, ke kufanelekile kwezo ndlu zihlala khona abathandi kunye nabagxeki.
Kwibhokisi sinayo yonke into oyifunayo ukuyifaka emnyango wethu, nakwiwebhusayithi yakho (unxibelelwano) sinokubona ukuba isitshixo sethu siyahambelana, into ekucetyiswa ukuba uyenze ngaphambi kokuyithenga. Ingxowa iqhagamshela ngeBluetooth 5.0 kwi-iPhone yethu, ekucacayo ukuba kufuneka sisondele kuyo, kwaye ukuba sifuna ukuyidibanisa neKhayaKit, ikwaqhagamshela kwi-Apple TV, i-iPad okanye i-HomePod, eya kuthi isebenze njengombindi wokufikelela kude. Isebenza ngeebhetri ezine zeAA, ezinokutshintsha ngokulula. Kwakhona kubandakanya ukuvula umnyango kunye nokuvala inzwa.
Yibhulorho eqhagamshela kwisitshixo sakho ngeBluetooth kunye nenethiwekhi yakho yeWiFi, evumela ukufikelela okukude kwesitshixo ngaphandle kwesidingo seKhayaKit. Ukuba unayo iKhayaKit, ibhulorho ayibalulekanga, kodwa ikunika imisebenzi eyongezelelweyo njengokukwazisa ukuba uphume ekhaya ungatshixanga isitshixo. Singayishwankathela ngokungathi ufuna ukusebenzisa i-app yasekhaya ye-iOS, awuyidingi ibhulorho, kodwa ukuba ufuna ukusebenzisa i-app yeNuki kunye nemisebenzi yayo ngelixa ukhiye ngaphandle, uyayidinga.
Isilawuli esincinci esincinci esivumela ukuba uvule kwaye uvale iqhaga ngaphandle kwezitshixo, ilungele ukunika undwendwe okanye abantwana kunye nokuvula iqhaga ngaphandle kokufuna izitshixo okanye i-smartphone.
UNuki usinika esakhe isicelo sokusebenzisa isitshixo. Ngayo sinokuvula kwaye sivale, kodwa siya kuba neminye imisebenzi ephambili ngakumbi, njengokukwazi ukuvula ngokuzenzekelayo xa ukufutshane, ngaphandle kokuphakamisa umnwe, vumela abanye abantu ukuba bavule okwethutyana okanye ngokungapheliyo, bona ilog yokuvalwa kunye nokuvalwa ngumsebenzisi, fumana izaziso ngalo lonke ixesha ucango luvulwa kwaye luvaliwe, okanye yenza inkqubo yokutshixa ukuvala ngokuzenzekelayo xa ushiya. Zonke ezi mpawu ziphambili yile nto ibhulorho yeNuki.
Ukusebenza kwesicelo kuyinto enomdla, kwaye nje ukuba uzulazule kuyo uya kuba nakho ukuyicwangcisa ngendlela othanda ngayo usebenzisa imisebenzi ofuna ukuyisebenzisa, kunye nokwenza zingasebenzi ezo ungazenziyo. Impendulo yokutshixa iyakhawuleza, nangona kufuneka ulinde iimoto ukuvula ucango, oluthatha imizuzwana embalwa ubude kunokuba uzenzile ngokwakho ngesitshixo ... ukuba nje akufuneki ukhawuleze ibhegi yakho okanye ubhaka. Kwakhona xa ugqibile ukuvula iqhaga, likwavula i "latch" kwimizuzwana embalwa ukuze ucango luvuleke okanye kufuneka ucofe, ke ukuba unezandla ezigcweleyo awuyi kuba nangxaki ukungena.
Umdibaniso neqonga leApple lwenziwa ngamaziko alo okufikelela ngokulula (iApple TV, iKhayaPod okanye i-iPad). Ukuqhagamshela kwiqonga le-Apple kuthetha ukuba nakho ukwenza i-automation kunye nezinye izixhobo, ezinje nge yithi "Nilale kakuhle" zacima zonke izibane kunye namaqhaga atshixwayo. Iithegi ze-NFC zokuvula umnyango nokulayita izibane, sebenzisa uSiri ukulawula isitshixo ngelizwi lakho ... onke amathuba anikezelwa yiKhayaKit asemthethweni ngoNuki, kwaye zindaba ezimnandi ezo. Kwakhona, njengoko besitshilo, ukuba usebenzisa iKhayaKit awuyidingi ibhulorho yokufikelela kude.
Njengenyathelo lokhuseleko, unokuvula kuphela isitshixo seNuki kwi-iPhone yakho engatshixwanga okanye kwi-Apple Watch yakho ebekwe esihlahleni sakho kwaye ivulwe. Akunjalo ngePod yasekhaya, enokuyivala kodwa ingayivuli, kuba ayinokwazi ukuba umntu onika umyalelo ugunyazisiwe ukuba avule ucango. Ukuvumela abanye abantu ukuba bavule ucango nge-iPhone yabo kuya kufuneka wabelane ngendlu yakho kunye nabo kwaye ubanike ukufikelela.
Kolu hlaziyo sigxile kukuhambelana kwayo neKhayaKit, kodwa I-Nuki iyahambelana namanye amaqonga amabini azenzekelayo asekhaya, zombini iAmazon's Alexa kunye noMncedisi kaGoogle.
Isitshixo se-Nuki smart sikwazile ukoyisa iingxaki eziphambili zezinye iimodeli: Ukufakwa ngokulula, ngaphandle kokutshintsha iqhaga kunye nokhuseleko olusinika iKhayaKit. Kukwabaluleke kakhulu ukwazi ukuba ukuba itekhnoloji iyasilela, ungasoloko usebenzisa indlela yesiqhelo yokuvula ngesandla. Ukusebenza ngokutyibilikayo kunye nokuphendula ngokukhawuleza, kunye nenani elikhulu lamathuba asinika iKhayaKit ngokweMeko-bume kunye neZenzekelayo ukugcwalisa isixhobo esinokubethwa kuphela ngento yokuba yenza ingxolo xa kuvulwa okanye kuvalwa, into engathethi kwelinye icala akukho ngxaki. Ixabiso liyahluka kwikhithi esiyithengayo
INuki Smart Tshixa 2.0 € 229,95 (unxibelelwano)
INuki Smart Lock 2.0 + iNuki Bridge € 299 (unxibelelwano)
INuki FOB € 39 (unxibelelwano)
INuki Smart Lock 2.0
Ukufakwa ngokulula ngaphandle kokutshintsha izitshixo
Iyahambelana neKhayaKit, Alexa kunye noMncedisi kaGoogle
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izixhobo ze-IP » UNuki, isitshixo esivumayo esihambelana neKhayaKit
Octavio Javier sitsho
Ngaba inokuvulwa ngaphandle ngesitshixo?
Phendula u-Octavio Javier
Ukuba kufuneka ushiye isitshixo kwisilinda ukuze sisebenze, ungasifaka njani isitshixo esivela ngaphandle ukuba asisebenzi.
UDavid M. sitsho
Ukuze isitya kufuneka sikhuseleke. Ngamanye amagama, ungaluvula ucango luvele ngaphandle nangaphandle ngaphakathi. Kubalulekile !!!
UFelipe vidondo sitsho
Kwisitshixo sam ndinebhalbhu yokukhanyisa ephezulu enokuthi xa ndinaso isitshixo ngaphakathi, bangakwazi ukufaka isitshixo, bandixelele ukuba ndinokuba yintoni nale nye ibhalbhu yokukhanyisa. Ndingathanda ukwazi ukuba lonke iqhaga livuliwe ngaphandle ngeselula okanye ngerimothi, kubandakanya isiliphu, enkosi, ndingathanda nokwazi ukuba iyasebenza nge-Android kunye ne-iPhone ngaxeshanye
Phendula uFelipe Vidondo
Ngemihla- Ukujonga iApple kunye nokuKhangela kweArrhythmia